6 Arimood oo ay la Gaar Ahaayeen Go’aanadii Kasoo Baxay Shirweynihii Al-Shabaab. (Maqaal Cusub) – Shabakadda Amiirnuur
April 23, 2020 5:44 am by admin Views: 104
Kadib markaan akhriyay qodobadii kasoo baxay shirka ay qabatay xarakada al-Shabaab, xafiiskeeda qaabilsan siyaasada, go’aanada ay soo saareen ka qeybgalayaasha, kuwaas oo ku qornaa Luuqadaha Soomaaliga iyo English-ka waxay la gaar ahaayeen lix (6) qodob kuwaas oo aan doonayo inaan ku gorfeeyo qormadan kooban:
Qodobka 1aad ee war murtiyeedka ayaa waxaa lagu yiri: “waa in Mujaahidiintu ay sii xoojiyaan Jihaadka fardu-ceynka ee ay ku difaacayaan Diinta, Dalka iyo Dadka Muslimiinta.”
Shirarka waaweyn iyo go’aanada siyaasadeed ee maamulada kajira dalka inta badan laguma soo hadal qaado ereyga Jihaad, Halgan iyo erayo ka tarjumaya gumeysi-diidnimo. Ereyga jihaad ayaa la adeegsan jiray xiliyadii ay muslimiintu awooda lahaayeen dunidana ka talin jireen. Taariikhyahanada muslimiinta ayaa qoraalo badan ka sameeyay Jihaadkii uu galay Nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee, Alshabaab ayaa sheegta iney u halgamayaan sidey usoo celin lahaayeen dowladii islaamka, taasoo burubrkeedii laga joogo kudhawaad halqarni.
Qodobka 3aad ee warmurtiyeedka ay soo saareen ka qeybgalayaasha shirka, waxaa lagu sheegay: “In waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamullada gaaladu kadhiseen qaybo kamid ah Soomaaliya ay yihiin maamullo ridda ah, diinta Islaamkana ka baxay, waajibna ay tahay in lala dagaalamo”.
Qodobka 4aad waxaa lagu sheegay: ” In ay xaaraan tahay ka qaybqaadashada waxa loogu yeero doorashada dimuquraadiga ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu doonayaan inay kaqabsoonto deegaanada ay xooga kuheystaan Saliibiyiinta loogu yeero AMISOM”.
War Murtiyeedka kasoo baxay Al-Shabaab waxaa go’aanada lagu xusay kamid ahaa: “In aad looga digtoonaado qulqulka gaalada Itoobiyaanka ah ee soo galaya dalka, tiro badan oo kamid ahna ay saldhigteen qaar kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka.”
Go’aankan waa mid aysan suuragal ahayn inuu kasoo baxo maamul goboleedyada hoostaga dowlada Federalka iyo xukuumada Farmaajo. Dowalada Itoobiya ayaa safaarada dhowr ah ku leh dalka, waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo kor u dhaafaya 10’000 oo askari. Ra’iisul wasaare Abey Ahmed ayaa saameyn weyn ku leh siyaasada Soomaaliya.
Mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanayey qulqulka itoobiyaanka soo galaya Soomaaliya. Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa ah degaanada ugu badan ee ay soo gaaraan soo galootiga Xabashida. Culimada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa walwal xoogan ka qaba isbadelka ku dhici kara demographic deegaanadaas, waxey sidoo kale arkaan in mawjadaha soo galooti ay yihiin kuwo qorsheysan oo aad looga soo baaran degay islamarkaana is gaar ah u beegsanaya degaano xeebeedka ku teedsan bada cas iyo marinka “Baab Al-Mandab”.
Go’aanka ay dad badan la ashqaraareen ee ku xusnaa war murtiyeedka Al-Shabaab wuxuu ahaa qodobka 13aad kaasoo lagu yiri: “kasoo qeybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaatka Islaamiga ay qalcad adag u yihiin Muslimiinta dhamaantood, maganna u yihiin qof kastaoo dhibane u ah dulmiga gaaladu kuheyso Muslimiinta”
War murtiyeedka Shabaab waxaa lagu yiri waa: “Inay bulshada Muslimka ka digtoonaadaan cudurada faafa ee kusoo badanaya dunida sida Corona Virus iyo HIV-ga, taasoo ay faafinteedu kaalin lixaadleh kaqaadanayaan ciidamada saliibiga ah ee dalka kusoo duulay, iyo dolwadaha gaalada ah ee taageerada siiya.”
Xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyay dumar badan oo afduub loo heystay kadibna la qaadsiiyay cudurka dilaaga ah ee HIV AIDIS-ka, warbixin kasoo baxday hay’ada xuquuqul insaanka-Human Rights Watch ayaa diiwaan gelisay in ka badan 10-kiis oo kala duwan oo kamid ahaa kufsiyo ay geysteen ciidamada AMISOM, Intaas waxaa sii dheer tobanaanka ruux ee ay ku dileen wadooyinka Muqdisho ama ay jiirsiiyeen gawaaridooda gaashaaman.
Muuqaal laga qaaday madaxweynaha Ugandha, Yuweri Museveni ayaa lagu baahiyay baraha bulshada isagoo canaanaya askari Police-ka ka tirsan oo dharbaaxay gabar yugaandheys ah.Askarigi ayuu wuxuu ku yiri: “Haddii aad dooneyso dumar aad dharbaaxdo waxaan kuu direynaa Soomaaliya, halkaas ayaa looga baahan yahay dharbaaxsho”.